Jereo hoe inona ny akanjo nentin-drazana any India | Vaovao momba ny dia
Susana Garcia | | kolontsaina, General, India
Rehefa mandeha any amin'ny firenena hafa izay manana a kolontsaina samy hafa tanteraka amin'ny antsika dia tianay ny mijery ny zava-drehetra, satria miova avy amin'ny gastr gastrie ho amin'ny fampiasana sy fomba amam-panao na fitafiana. Androany dia hiresaka momba ny akanjo any India isika. Na dia amin'izao fotoana izao any amin'ny ankamaroan'ny firenena aza ianao dia afaka mahita akanjo mitovy amin'izany noho ny fanatontoloana, ny tena marina dia amin'ny toerana maro dia mbola voatahiry miaraka amina akanjo mahazatra sy ireo sombin-javatra mbola ao anatin'ny kolontsain'izy ireo ny fomba amam-panao.
ny ny akanjo mahazatra dia tena misolo tena ny kolontsain'ny toerana tsirairay ary izany no mahatonga antsika mahita ny fitafian'i India ho zavatra iray izay tafiditra ao anatin'ny kolontsainy. Ho hitantsika bebe kokoa momba an'io karazana akanjo io izay ampiasaina amin'ny fiainana andavanandro na izay ampiasaina amin'ny lanonana sy fotoana manokana.
1 Mandehandeha any India
2 Akanjo vehivavy any India
3 Akanjo ho an'ny lehilahy any India
Mandehandeha any India
Raha mandeha any India isika, toy ny any an-toeran-kafa, dia mety tsy maintsy mifanaraka kely amin'ny fomban-dry zareo isika. Ny akanjo dia miloko tokoa ary ho hitantsika ny lamba mahatalanjona maro feno antsipiriany, miaraka amin'ny lamba maivana. Izy io dia zavatra hisarika ny saintsika. Fa izany koa zava-dehibe ny mampifanaraka ny mahazatra azy ireo. Amin'ny ankapobeny dia tsy fanaon'ny vehivavy ny mampiseho feno ny tongony na ny sorony, noho izany dia tsara kokoa hatrany ny manao akanjo malina miaraka amin'ny lobaka manarona ny soroka na angamba scarf raha toa ka tsy maintsy ampifanarahintsika izany mba handrakofana antsika. Raha manaja ny fomban-dry zareo isika dia azo antoka fa ho mora kokoa ny fitsidihana an'i India ary hankafizintsika bebe kokoa izany.
Akanjo vehivavy any India
Any India dia misy akanjo iray tena mampiavaka azy ary azo antoka fa tonga ao an-tsaina ny sarivongan'ny vehivavy mahazatra. Ity tokoa ilay akanjo malaza sy ampiasain'ny vehivavy any India amin'ny fomba nentim-paharazana. Lamba iray mirefy dimy metatra ny halavany ary 1.2 ny sakany. Ity lamba ity dia voadona manodidina ny vatana amin'ny fomba manokana, mamorona akanjo. Azonao atao koa ny manampy blouse sy zipo lava antsoina hoe peikot. Ireo no akanjo izay ho hitantsika indrindra ary tsy isalasalana fa ho tianay. Ny endriny sy ny lokony dia tsy misy fiafarana ary azo ovaina amin'ny fotoana samihafa arakaraka ny kalitaon'ny lamba na ny endriny. Mpizahatany maro no tonga mividy sari soa ho fahatsiarovana.
Akanjo hafa izay ampiasain'ny vehivavy karana dia ny Salwar kameez. Salwar no anarana iantsoana ny pataloha malalaka izay mifanentana amin'ny kitrokely ary akanjo tena ahazoana aina. Ity karazana pataloha ity aza dia nanjary nalaza taona lasa izay tamin'ny kolontsainay. Matetika izy ireo dia ampiasaina amin'ny toerana anaovana asa mafy toy ny eny an-tendrombohitra ary akanjo mety ho an'ny lehilahy koa izy io. Akanjo lava tanany lava mahatratra ny lohalika no ampiana ireo pataloha ireo. Amin'ny ankapobeny, ireo akanjo ireo matetika dia mitovy amin'ny sari.
Akanjo ho an'ny lehilahy any India
Amin'ny lehilahy dia misy ny sasany akanjo mahazatra toy ny dhoti. Ity dia pataloha fotsy tena mampahazo aina izay misy lamba mahitsizoro amin'ny halavan'ny saree ary manodidina ny valahana, mandalo amin'ny tongotra ary miorina indray eo amin'ny andilana. Mahafinaritra sy maivana ary fotsy matetika, na eo aza ny alokaloka hafa toy ny crème. Na dia entina manerana an'i India aza izy io dia mahazatra kokoa ny toerana toa ny fanjakan'i Bengal.
Hafa ny akanjo mahazatra any India ho an'ny lehilahy ny kurta. Ny kurta koa dia mitafy amin'ny toerana toa an'i Pakistan na Sri Lanka. Akanjo lava latsaka ny lohalika na somary ambany kely aza. Indraindray koa ny vehivavy dia mitafy azy, na dia amin'ny endriny fohy kokoa aza miaraka amin'ny lamba hafa miloko kokoa na amin'ny lamina hafa, satria mazàna mampiasa lamina voninkazo maro izy ireo. Ity kurta ity dia azo ampiasaina amin'ny pataloha salwar na dhoti.
Misy akanjo izay mampiavaka ary izay tsy ampiasaina hitoviana na aiza na aiza, toy ny mitranga amin'ny lungui, izay ho hitantsika ho toy ny zipo lava mifatotra amin'ny andilana. Ity sombin-javatra ity dia azo ampiasaina amin'ny fomba samihafa ary miankina amin'ny faritra anaovan'ny lehilahy, vehivavy na azy roa. Ohatra, ao Panjab dia singa maroloko be izy ireo ary azon'ny lehilahy sy ny vehivavy anaovana azy, ao Kerala dia manana ny mampiavaka azy fa voafatotra amin'ny ilany ankavanana izy ary samy tonta ary amin'ny toerana toa an'i Tamil Nadu dia ny lehilahy ihany no manao azy ary izy io voafatotra amin'ny ilany ankavia. Ity dia sombin-landihazo iray ary miankina amin'ny faritra dia mety amin'ny loko tokana na manana endrika sy loko isan-karazany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » General » Akanjo Indiana